I-Oasis yedolophu ephangaleleyo yangoku
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSazia
Relax kwaye uphumle kule ndlu iyilwe yangoku inika ingqalelo eninzi kwiinkcukacha.
Le ndawo isembindini yindibaniselwano egqibeleleyo yokulula kunye nokuthuthuzela!
Le ndlu ibanzi kwaye igcwele ukukhanya kwendalo kumgangatho ophezulu wesakhiwo sokuhlala esinemigangatho eyi-8. Yindawo yanamhlanje, enesitayile eqinisekileyo ukuba inomtsalane. Ineendawo eziluhlaza ngokwaneleyo zombini kumgangatho ophantsi (onqabile ukufunyanwa eDhaka!) nakwindawo yophahla lwendawo yokuhlala.
Kukho i-lift kunye nejenereyitha yeeyure ezingama-24 kunye noonogada beeyure ezingama-24.
Kwigrosari kukho ikhonkco elikhulu levenkile enkulu yakwaShopno kumgama nje weemitha ezimbalwa.
4.96 · Izimvo eziyi-53
Ummandla wase-Mohammadpur yindawo ephilileyo, ephithizelayo yaseDhaka, umgama ohambahambayo ukuya kwiiNdlu ezintle zePalamente kunye neendawo ezizungezile eziluhlaza- zilungele i-jog yasekuseni! Indawo yokuthenga edumileyo kunye neendawo zokutyela ezininzi ezisemgangathweni eDhanmondi yimizuzu eli-10 yokonwabisa uritsho!
Umbuki zindwendwe ngu- Sazia
Ungaqhagamshelana nam nge-imeyile ngaphambi kokuba ufike. Ngomhla wokufika endibambana naye u-Sahadhat uya kudibana nawe kwipropathi kwaye unokufowunelwa kwinombolo yakhe yefowuni yendawo ngexesha lokuhlala.